VaMthuli Ncube Voenderera Mberi neMisangano yeIMF/World Bank muWashington Apo Hupfumi Pasi Rose Hwosangana neMatambudziko
Gurukota rezvemari VaMthuli Ncube kurudyi
Gurukota rinoona nezvemari Muzvinafundo Mthuli Ncube vari kuenderera mberi nemisangano yepagore yeIMF neWorld Bank iri kuitirwa muWashington DC. Muzvinafundo Ncube nhasi vange vachitarisirwa kupinda mumisangano inechitsama iri kutarisa mamiriro enyaya dzezvehupfumi pasi rose.
Misangano iyi inosanganisira nyaya dzekuunza budiriro muhupfumi, kugadzirisa nyaya dzemari nekuti dzisashaye huremu, mamiriro aita zvinhu muhupfumi hwenyika dzepasi rino nezvimwe zvakaita senyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu.
Vachinyorawo padandemutande ravo reTwitter, Muzvinafundo Ncube vakati Bhodhi reIMF rakatandawo kuumba sangano rinonzi Resilience and Sustainability Trust kubatsira nyika kudzikamisa hupfumi kana dzasangana nekusagadzikana kwenyika pasi rose, zvichikonzera nekushandukwa kwemamiriro ekunze uye zvirwere.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica Muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti misangano iyi yakakosha asi Zimbabwe inofanirawo kushanda zvakasimba kudzikamisa hupfumi hwayo.